Izay lazain'i Taylor Swift an'i Apple Music dia eken'i Apple | Avy amin'ny mac aho
Jesus Arjona Montalvo | | Apple, Apple Music, About us, maro
Taylor Swift nanoratra taratasy misokatra ho an'i Apple izy, manazava ny antony nanapahany hevitra tsy hamoaka ny rakikirany "1989" amin'ny serivisy vaovao an'ny orinasa. Ato no anombohany ilay taratasy, fiderana an'i Apple ho iray amin'ireo mpiara-miasa aminy faran'izay tsara amin'ny fivarotana mozika, ary nidera izany, ho toy ny fotodrafitrasa hifandraisana aminy mpankafy.
Na izany aza, nanohy izy mitsikera paoma ny tsy mandoa mpanoratra, mpamokatra ary mpanakanto mandritra ny fotoam-pitsarana telo volana voalohany an'ny Apple Music. Na dia efa fantatsika aza, araka ny fanazavany amin'ity lahatsoratra mpiara-miasa amintsika Miguel Ángel Juncos, izay Nihemotra i Apple. Fa inona no nolazainy tao anatin'io taratasy io, mba hieritreretan'i Apple izany?
Ilay mpihira tsara tarehy tsy nanoratra taratasy ho tombontsoanao ianao. Fa kosa, ity taratasy ity dia momba ny indie, mpamokatra mozika, mpihira ary mpanoratra rehetra mitsikera paoma, ary ho iray manontolo amin'ny adinao, mba handoavana vola amin'izany fe-potoana Apple Music maimaimpoana izany.
Tsy momba ahy io. Soa ihany aho fa ao amin'ny rakikiriko fahadimy, ary afaka mitazona ny tenako aho, ny tariko ary ny ekipa mpitantana iray manontolo. Ity dia ilay mpanakanto vaovao na tarika vaovao, izay vao avy namoaka ny singany voalohany ary vao manomboka. Ho an'ny mpamokatra ihany koa, izay miasa tsy an-kijanona amin'ny fanavaozana sy famoronana, sahala amin'ny fanavaozana sy mpamorona an'i Apple, mpisava lalana amin'ny sehatra misy azy ireo izy ireo.
Taylor Swift dia nidera ny tanjon'i Apple, avy miasa amin'ny serivisy fandefasana mozika karama, fa manentana ny orinasa Cupertino handoa mpanakanto mahaleo tena ao ny telo volana voalohany izay maimaimpoana ny Apple Music, satria manam-bola handoavana azy ireo izy ireo, na dia hisy aza ny serivisy afaka tanteraka ho an'ny mpanjifa amin'izany fe-potoana izany.
Ny telo volana dia lava nefa tsy mandoa, ary tsy rariny ny mangataka an'iza na iza hiasa tsy misy. Amim-pitiavana sy fanajana ary fankasitrahana no lazaiko an'izay rehetra nataon'i Apple. Manantena aho fa tsy ho ela dia afaka miaraka amin'izy ireo amin'ny fandrosoana mankany amin'ny maodely mivantana, toa izany rariny ho an'ireo izay mamorona an'ity mozika ity.
Mpihira mamarana ao amin'ny taratasiny ho an'i Apple, fa manova ny politikany izy ireo, nanomboka mbola misy fotoana.
Tsy manontany izahay IPhones maimaim-poana. Aza mba mangataka anay hanao mozika nefa tsy misy onitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Music » Izay nolazain'i Taylor Swift momba ny Apple Music hampihemorana an'i Apple